अन्तराष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता स्याङ्जामा हुने – MeroJilla.com
आज प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा जम्बो टोलि, को-को जाँदैछन् ? सूचि)
अन्तराष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता स्याङ्जामा हुने
स्याङ्जा , ६ कात्तिक ।
यही कात्तिक १५ देखि २० गतेसम्म भिरकोट नगरपालिका– ५ स्वरेक मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता हुनेभएको छ । प्रतियोगितामा नेपालसहित २५ देशका झण्डै ३ सय खेलाडीको सहभागिता रहने आयोगकले जनाएको छ ।
स्याङ्जाको स्वरेक मैदान प्याराग्लाइडिङका लागि एक उत्कृष्ट स्थान रहेको र त्यहाँबाट दैनिक प्याराग्लाइडिङ हुने गरेको छ । यस ठाउँमा प्याराग्लाइडिङसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने स्कुलसमेत रहेकाले त्यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तथा खेलाडी भित्र्याउने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बाबु एडभेञ्चर क्लबका अध्यक्ष कृष्णजंग केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतियोगितामा स्याङ्जा जिल्लाका चापाकोट, गहाँैसुर, सिर्सेकोट, मिर्मी, हुनिकोट, सतौँ, खिलुङ र सिरुवारीलाई समेट्ने लक्ष्य लिएर आयोजना गरिएको हो । प्याराग्लाइडिङ प्रतियागितामा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, स्पेन, स्विट्जरल्याड, बंगलादेश लगायतका देशका खेलाडीको सहभागिता रहनेछ ।
छ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ८५ लाख खर्च हुने अनुमान आयोजक बाबु एडभेञ्चर क्लबले गरेको छ । प्रतियोगिताबाट सन् २०१८ मा इन्डोनेसियामा हुने एशियाली हवाई खेलकुदका लागि चार महिला र आठ पुरुष छनोट गरिनेछ ।
इंग्ल्याण्डलाई जिताउन ह्यारी केनको हेडिङ बल निर्णायक बन्यो	Tuesday, June 19th, 2018
आज प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा जम्बो टोलि, को-को जाँदैछन् ? सूचि)	Tuesday, June 19th, 2018
डा. उपेन्द्र देवकोटाको अन्त्येष्टि भोलि, ७ दिनमै काज किरिया सक्ने	Monday, June 18th, 2018
राष्ट्रियसभा सांसदको कार्यकाल : गोलाप्रथामा कसलाई के पर्यो ?	Monday, June 18th, 2018
नामको मात्र बजार अनुगमन,व्यापारीलाई झनझन काईदा	Monday, June 18th, 2018
टेलिभिजनलाई चाँडै सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गरिने June 18, 2018